Mukadzi angazive sei kuti anonaka pakusvirwa - Masasi eHarare
Ask Tete Molly Mukadzi angazive sei kuti anonaka pakusvirwa
Mukadzi wese ane shungu dzekuziva kuti beche rake rinonaka here asi oshaya wekubvunza. Chiripo ndechekuti kunaka kwemukadzi kuri pakudziya kwebeche nepakukwanisa kusunga mboro ne muscle yatinoti PC muscle. PC muscle ndiyo inoita kuti beche rinzi riri tight.
Ungazive sei kuti beche riri tight?
– Pinza zvigunwe zviviri zvakachena mubeche rako wosunga beche seuri kumisa weti. Chipinza chigunwe chimwe chete wosunga zvekare. Ukanzwa chigunwe chako chichishinyiwa zvinotoda kurwadza, zvinoreva kuti une beche kwaro rinonaka chaizvo.
– Asi ukasanzwa kushinyiwa kwechigunwe, beche rakadhamba. Rinoda kudzorwa uye rinodzoreka pasina mishonga.
Kusimbisa muscle yebeche kuti rive tight
– Pota uchisunga muscle yebeche seuri kumisa weti uchiregedza, uchisunga, uchiregedza kakawanda pazuva rega rega.
– Ukawana mukana, dhonza matinji. Anowedzera kudziya kwebeche.
– Beche rikave tight rinoita kuti iwe muridzi waro unakirwe nebonde uye ugone kutunda kakawanda pabonde.